Mareykanka oo ku hanjabay inuu tallaabo ka qaadayo xasaradaha ka socda Venezuela - BBC Somali
Mareykanka oo ku hanjabay inuu tallaabo ka qaadayo xasaradaha ka socda Venezuela
Natiijooyin horudhac ah ayaa saacadaha soo socda la filayaa inay ka soo baxaan doorashada dalka Venezuela ee aftida loogu qaadayay in dib loo qoro dastuurka dalkaasi.
Ugu yaraan toban qof ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhinteen qalalaaso ay doorashadaasi sababtay, waana maalmihii uu dhiigga ugu badan ku daatay ku dhowaad afar bilood oo dalkaasi ay ka jirto xasilooni-darro siyaasadeed.
In ka badan boqol qof ayaa noloshooda ku waayay qalalaasaha dalkaasi ka socda. Waxaa jiray isku dhacyo dhex maray booliiska iyo dad dibad baxayay oo ka soo horjeeday codbixintaasi. Codbixinta ayaa waxaa ka biyo diiday xisbiyada ka soo horjeeda madaxweyne Maduro oo xukuma baarlamaanka Venezuela. Waxay ku doodayaan in tani ay keliya waqtiga u sii dheereyneyso madaxweynaha.
Dhanka kale Mareykanka oo ka jawaab celinaya xasaradaha ka taagan Venezuela, ayaa sheegay inuu tallaabo xoggan ka qaadi doono waxa uu ugu yeeray "keligood-taliyeyaasha". Wuxuu sheegay inay ku jiraan xildhibaannada lagu soo doortay doorasho uu ugu yeeray inay ahayd mid daciif ah .